यौन दुर्व्यवहार - अपराधीहरू, लक्षणहरू र थप क्रियाकलापहरू बुझ्छन्
खतरा र इनाम - छोराछोरीसँग अपराधीको तरिकाबारे छलफल
इन्टरनेटमा यौन आक्रमणबाट छोराछोरीलाई कसरी सुरक्षा गर्ने?
इन्टरनेटको अनुमानित सुरक्षा
बालबालिका र किशोरका यौन दुरुपयोग कहाँ सुरु हुन्छ?
यौन दुर्व्यवहारको लागि संकेत
के तपाईंको बच्चा यौन दुर्व्यवहार भएको थियो भने के गर्न?
संदेह छ भने के गर्न
सबै आमाबाबुले आफ्नो छोराछोरीलाई हिसाब र हिंसात्मक यौन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन चाहन्छन्। तर जब यो सबैलाई बच्चाहरु संग यो विषयमा छलफल गर्न सक्छ? अनि के वास्तवमा एक बच्चाले विशेष गरी विशेष गरी चेताउनी दिन्छ? यो सबै विवरणहरू खुलासा गर्न आवश्यक छ वा त्यहाँ यौन आक्रमणबाट बालबालिकाको सुरक्षा गर्न केही आधारभूत नियमहरू छन्? तथ्यलाई हेर्ने कि अपराधकर्मी प्रायः पारिवारिक सदस्यहरू हुन्, यौन दुर्व्यवहारको विषय अझ गाह्रो छ र अत्यधिक संवेदनशीलताको सामना गर्न सकिन्छ। बच्चालाई बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि हरेक समस्याको साथ र सबै डरले सधैं आमाबाबुमा आउँदछ।
यौन दुर्व्यवहार - बलियो आत्म-सम्मानको माध्यमबाट सुरक्षा
आत्म-आत्मविश्वासका बच्चाहरू यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने सम्भावना कम छन्। अपराधीको लागि इन्मिट्री थ्रेसहोल्डले यहाँ उच्च देखिन्छ जस्तो लाग्छ, उनी डर राख्छन् कि बच्चाले आफूलाई बचाउन सक्छ वा घरको दुर्व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। यसैले तपाईंको बच्चालाई सर्वोत्तम सम्भावित आत्म-छवि र उनीहरूको शारीरिक आवश्यकताहरूमा ध्यान दिन र तिनीहरूको आदर गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो चाचाको चुम्बन संग सुरु हुन्छ, जुन बच्चाले इन्कार गर्दछ। कहिल्यै छुनुहोस् वा कारवाही गर, जसले बच्चालाई असहज बनाउँछ।
बाल दुर्व्यवहार रोक्नुहोस्
एक "यो खराब छैन, आफैलाई एक साथ टाँस्नुहोस्, अन्यथा चाचा अपमानित छ" एक बिन्दु हो जसमा भविष्यमा अपराधीको बीउ। किनकि उसले बच्चाहरूलाई चीज गर्न चाहन्न जुन यस्तो चाहना पनि प्रयोग गर्न सक्दिन। एक बच्चा जान चाहन्छ र के गर्दैन, यो आफैले निर्धारण गर्दछ। यो साहस पनि लाग्छ कि भन्न चाहानुहुन्छ कि चाचीले छुनु हुँदैन। यसको लागि बच्चाहरूलाई आत्मविश्वास चाहिन्छ र आफ्नै शरीरसँग व्यवहार गर्न सक्षम हुनुको लागी।
यदि तपाईंको बालबालिका भन्दा बेकार र आरक्षित हो भने, तपाइँ विशेष पाठ्यक्रमहरूमा आफ्नो आत्मविश्वास बढाउन सक्नुहुन्छ। लगभग हरेक शहर आज यो छ, र केही संस्थाहरु द्वारा बालबालिकाका लागि आत्म-रक्षा प्रदान गरिएको छ। यो एक किशोरावस्थामा प्रभावकारी ढंगले वयस्कको विरुद्ध आफैलाई रक्षा गर्न सक्दछ भन्ने कुरा होइन, तर ज्ञानले यस्तो तरिकाले बच्चा प्राप्त गर्दछ यो आत्म-भरोसा र साहसी बनाउँछ भन्ने ज्ञान - र यसरी यो पीडितपनबाट बाहिर लैजान्छ।
खुलापन र शिक्षाको सुरक्षा गर्नुहोस्!
तपाईंको बच्चाको साथ राम्रो सम्बन्ध अल्फा र ओमेगा हो जब तपाईंको बच्चालाई तपाईमा जब तपाईलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। संयोगमा, तपाईंले आफ्नो बच्चालाई कामुकताको रूपमा खुला, खुल्ला र शंका बिना मधुमक्खी र सानो फूलहरु संग कथा लामो समय बित्यो।
एक बच्चाले यो थाहा छ के यो नाम मात्र सक्छ। त्यसैले सम्भव हुने रूपमा खोल्नुहोस्, सबै शरीरको भागहरू सही नाम दिनुहोस् र तपाईंको बच्चाको प्रश्नहरूको जवाफ ईमानदारीपूर्वक जवाफ दिन नदिनुहोस्।
यदि तपाईंको बालबालिका सोध्नुहुन्छ भने - र यो सोध्नेछ, किनकि सबै बच्चाहरु एक निश्चित उमेरको रुचि हो! - जहाँ बच्चाहरू आउँथे, उसलाई सम्भवतः असामान्य रूपमा रूपमा बताउनुहोस् र स्टर्क बाहिर बाहिर छोड्नुहोस्। अहिले अद्भुत रोचक पुस्तकहरू र पर्फलेटहरू छन् जुन आमाबाबुले बिना यौन सम्बन्धलाई निषेध गर्न मद्दत गर्छन्।
प्राथमिक उमेरका बच्चाहरूलाई थाहा छ के यौन दुर्व्यवहार हो। तपाईंको बच्चालाई स्पष्ट रूपमा सम्भवतः व्याख्या गर्नुहोस् र बिना यौन दुर्व्यवहार फेरि दोहोर्याउँछ। निस्सन्देह यो चेतावनी र चिन्तित बीचको तितो पैदल यात्रा हो।
यसैले, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो बच्चालाई पनि बताउनुहुन्छ: त्यो अवस्थित छ, तर यो तुरुन्तै हुन्छ। तर यदि यो हुन्छ भने, तपाईं यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्छ। अपराधीहरूको सबैभन्दा सामान्य तरिका बच्चालाई चुप लाग्ने हो। उहाँले खतरा बनाउनुहुनेछ वा बच्चालाई ब्ल्याममेल गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अथवा उहाँले प्रतिज्ञाहरू बनाउनुहुन्छ र आफ्नो मौनताको लागि बच्चालाई इनाम दिनुहुन्छ। त्यो पनि, तिम्रो बच्चालाई थाहा छ। जो विधिहरू थाहा पाउने व्यक्तिले यौन दुर्व्यवहार सुरु गर्दा यसलाई सजिलै सजिलै बुझ्न पाउनेछ र यसको विरुद्धमा आफूलाई रक्षा गर्न सक्दछ।
किनकि प्राय: यौन दुर्व्यवहार जीवित हुन्छ र एक सेकेण्ड देखि अर्को सम्म। एक अपराधीले आफ्नो बाटो अगाडि बढाउँछ र समय र अधिक र अधिक सिमाना छ। त्यसैले तपाईंको बच्चालाई असुविधाजनक कुराको तुरुन्तै बोल्न प्रोत्साहन दिनुहोस्, भोग्नु पर्ने भए तापनि। यो जान्नु पर्छ कि यो मात्र यो सुरक्षित हुन सक्छ यदि यो यसको बारे बोल्छ।
अल्पसंख्यक घोटालाका साथै इन्टरनेटले यौन दुर्व्यवहारलाई नयाँ ठाउँ प्रदान गर्दछ। यो कोठा वास्तवमा आमाबाबुले जस्तै विचार गर्नुपर्छ।
इन्टरनेटमा यौन उत्पीडन विरुद्ध संरक्षण
अपराध दृश्य: इन्टरनेट आफैँमा छ कि सबै भन्दा राम्रो छ अपरिचित बनेको छ, किनकि उसले केहि तयार पारेको छ, वास्तविक जीवनले के गर्न सक्दैन: पूर्ण नाम नदिने र कुनै साक्षी छैन। यसकारण, विशेष गरी यो नयाँ अपराध दृश्य धेरै लोकप्रिय छ।
दुर्भाग्यवश, बच्चाहरु, जो यस नयाँ संसारका नियमहरूसँग धेरै परिचित छैनन्, जो सबैभन्दा पीडा हुन्छन्। सौभाग्य देखि, त्यहाँ केहि आधारभूत नियमहरू छन् जुन सबै भन्दा कम उमेरमा वेबको संसारमा सार्न अनुमति दिन्छ।
पीडितहरूको खुलापन विरुद्ध अपराधीहरूको अज्ञातता
अपराधीहरू इन्टरनेटमा सजिलै तस्विरहरू, इ-मेल ठेगानाहरू, फोन नम्बरहरू र उनीहरूको पीडितहरूको ठेगाना पनि पत्ता लगाउन सक्छन्। चूंकि बच्चाहरु र किशोरहरु लाई प्रायः ज्ञात पेजहरुमा यिनीहरु को पोस्ट पनि गर्छन, यो उनको लागि बच्चाहरु को खेल छ र यसैले मात्र ज्ञान को दंडनीय छैन। अधिकांश समय, अपराधीहरूले यो जानकारी प्रयोग गर्दछन् आफ्ना पीडितहरूलाई सम्पर्क गर्न, प्रायः उनीहरूलाई भन्दा कम युवा बनाउँदछ, र आम चासोहरू बहकाउँदछ। कहिलेकाहीँ यो च्याट रूम वा सार्वजनिक फोरम पनि छ, जसको माध्यमबाट पहिलो सम्पर्क हुन्छ। यी फोरमहरूमा, युवा व्यक्तिहरू सँगै आम रुचिहरू हुन्छन् (उदाहरणका लागि, पोर्टलहरू जहाँ युवाहरूले आफ्नै कथाहरू पोस्ट गर्न सक्छन्, त्यसपछि त्यसपछि मूल्याङ्कन गरिएका छन्), ताकि साझा शौकको बारेमा उनीहरूलाई सम्पर्क गर्नु पनि कम उल्लेखनीय छ। अपराधीले सामान्यतया नकली प्रोफाइल प्रयोग गर्दछ, जसको अर्थ हो कि उनीहरूको आफ्नै डेटा (जन्म मिति, निवासको स्थान, स्कूल शिक्षा) वास्तविकतासँग सम्बन्धित छैन जस्तै माथि उल्लेख गरिएको छ।
समस्या पनि छ कि धेरै बालबालिका र किशोरहरू आफ्नै चार पर्खालहरूमा सुरक्षित हुन्छन्। वेबमा रहेको विश्व भर्चुअल हो, त्यसैले खतरा पनि भर्चुअल जस्तो देखिन्छ र वास्तविकताको मार्ग पत्ता लगाउँदैन। तर यौन दुर्व्यवहार कहिले सुरु हुन्छ? यो यौन दुर्व्यवहारको बारेमा कुरा गर्न अपराधीको साथ सँधै बैठकमा आउँदैन। केही अपराधीहरूले पीडित चित्रहरू यौन उत्तेजना वा यौन सामग्रीको साथ चलचित्रहरू पठाउँछन् - यो पनि एक आपराधिक कार्य हो, किनभने यसले बच्चा, युवा र अनुभवहीनलाई गाह्रो पार्न सक्छ, यसले डरलाग्दो र डरलाग्दो बनाउन सक्छ। साथै, लुगाहरू मेल वा चित्रहरू पठाउने अनुरोध आफैलाई यौन उत्पीडित अपराधहरू छन्।
कार्यस्थलको यौन दुर्व्यवहार अल्पसंख्यक अपराध होइन
सुरक्षित सर्फिंग को लागि एकदम सही लहर - बच्चाहरु को लागि युक्तिहरु
शीर्ष प्राथमिकता अज्ञात छ। इन्टरनेटमा तपाईंको ठेगाना वा फोन नम्बर पोस्ट नगर्नुहोस्। तपाईंको डाटा अजनबीमा कहिल्यै नपठाउनुहोस्, एक्लो खाता डाटा वा परिवारका चित्रहरू दिनुहोस्। यदि तपाइँ उपनाम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यसले तपाईंको वास्तविक नाम समावेश गर्दैन वा तपाईंको आयु प्रकट गर्दैन, जस्तै Lisa99। यसबाट, अपराधीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छ कि लिसा वर्ष XXXx मा जन्मिएको थियो। साधारण संख्या र नामहरू प्रयोग गर्नुहोस्। फेसबुक जस्ता पृष्ठहरूमा तपाईंले आफ्नो नोट फोटो सेट गर्नुभएन भने तपाईलाई अधिक सूचना दिनुहुन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि फोटो यौन उत्पीडित अपराधीहरूको लागि निमन्त्रणा होइन।
भर्चुअल स्पेस विरुद्धको वास्तविकता। नेट एक स्पेस, सीमाना बिना ठाउँ र असीमित संभावनाहरु संग। सबै केहि यहाँ हलचल छ: प्यारी मित्रहरु देखि बैंक लुटेर र बच्चा पिलाउन को लागी। प्रायजसो सबै भन्दा अपराधी अपराधीहरू अधिकांश निर्दोष बासिन्दासँग ड्रेस गर्छन्। होशियार हुनुहोस् कि वास्तवमा हरेक सुन्दर सम्पर्क पछि मित्र छैन।
यदि तपाइँ केहि हास्यास्पद फेला पार्नुहुन्छ भने, यसको बारे मा आफ्नो आमाबाबुसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईंले चाहानु भएको कुरा गर्न को लागी प्रसोधन नगर्नुहोस्। निजी तस्बिरहरू र टेलिफोन नम्बरहरू साथै यात्रा नियुक्ति अजनबीहरूको हातमा छैनन्।
सावधान रहनुहोस् कि वास्तविक व्यक्ति भर्चुअल प्रोफाईलहरू पछि लुकेको छ। सबैले एक मित्र हो - र मक्सी माईक्सएक्सएनएमएक्स साँच्चै मिठो मान्छे हो जुन सबै भन्दा राम्रो आवाज हो जुन यसको दाबी गर्न मिल्छ।
इन्टरनेट मित्रहरूसँग कुनै बैठकहरू छैनन्। एक मित्रलाई भेट्न कहिल्यै तपाईं इन्टरनेटबाट मात्र थाहा छ। यहाँ सबै भन्दा ठूलो खतराहरूमध्ये एक छ। यस प्रकारका निमन्त्रणाहरूको जवाफ नदिनुहोस्! यसको विपरीत: यदि तपाईं मजाकिया महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईले यो प्रोफाइल तुरुन्तै फोरमको प्रशासकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यहि व्यक्तिले यौन प्रकृतिको सामग्रीको साथ जबरदस्त गर्दा यो अवस्थामा लागू हुन्छ, यो भिडियोहरू, फोटोहरू वा उपयुक्त संकेतहरूको साथ पाठ बनाउनुहोस्। साइटको अपरेटरले तुरुन्तै पुलिसलाई फर्काउन सक्छ।
बच्चा र किशोरका यौन दुर्व्यवहारको लागी विश्वास गर्ने कोहीले मात्र यो सुरु हुन्छ जब यो यौन क्रियाको केहि रूप गलत छ। तर यौन दुरुपयोग वा यौन दुर्व्यवहारको वास्तवमा कहाँ सुरु हुन्छ? स्पष्ट रूपमा तपाईं यो सीमा स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्न। यद्यपि, जो पनि गरिमाको उल्लङ्घन गर्दछ र बच्चाको इच्छा स्पष्ट रूपमा एक आपराधिक कार्य हो।
बच्चाहरु को यौन दुरुपयोग को संरक्षण
त्यो परिभाषा अनुसार, यो पनि एक स्पष्ट रूप वा अश्लील टिप्पणी हुन सक्छ। हाम्रो समाज यस मुद्दामा अधिक संवेदनशील छ, जो एक हातमा धेरै सकारात्मक छ, र सबैलाई शैक्षिक संस्थाहरूमा काम गर्ने ध्यान दिइरहेका छन्। तर यो तथ्यले पनि जान्छ कि अधिकांश पुर्खाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूसँग छिटो रोक लगाउँथे, त्यसैले कुनै पनि गलत काम नगर्नुहोस्।
यसको निष्कर्षमा यौन दुर्व्यवहार
सुरुमा उत्पीडन छ। च्याट कोठा वा फोरम बालबालिकाहरू वा किशोरीहरूले अश्लील सामग्रीसँग भिडियोहरू वा फोटोहरू पठाइरहन्छन्। कहिलेकाहीँ तिनीहरू यौन क्रियाकलाप आफैले पनि, प्राय: स्काइप मार्फत सोध्नुहुन्छ, त्यसैले अपराधी तिनीहरूलाई हेर्न सक्छ। दुर्व्यवहारको अन्य रूपहरू सडकमा अपील वा पुनरावेदन स्पष्ट यौन शब्दहरू र सामग्री समावेश गर्दछ।
अर्को चरण बच्चालाई छुछ। अपराधीले बालबालिका क्षेत्रमा बच्चाले छुट्याउन चाहन्छन्, आफूलाई छुन्छ वा प्रोत्साहन दिन्छ कि उनी आफैलाई छोडिदिनु र उहाँलाई उहाँलाई हेर्न दिनुहोस्। छुट्याउन बलात्कार र / वा अन्य सबै यौन अभ्यासहरू समावेश गर्न सक्छ। निस्सन्देह, बाल पोर्नोग्राफी पनि बालबालिका र किशोरका यौन दुर्व्यवहारको भाग हो। यहाँ, बच्चालाई अनावश्यक र फिलिममा फोटो खिच्न बाध्य हुन्छ। कहिले काही यो पोर्चुगल तस्वीरहरु र चलचित्रहरू हेर्न वा अरूको अभ्यास हेर्न बाध्य हुन्छ। यौन दुर्व्यवहारको रूप सतावटका रोगी कथात्मक कथाहरू जस्तै विविध हुन्छन्!
किन यो त कहिले मात्र प्रदर्शित हुन्छ?
यौन दुर्व्यवहारको अनुहार खतरनाक छ। यो तथ्य यो तथ्य हो कि अपराधकर्मी अक्सर बच्चाको वातावरणबाट आउँछन्। प्रायजसो अवस्थामा, यो दुर्भाग्यवश परिवारका सदस्यहरू छन् जुन बालबालिकालाई आफ्नो शक्तिको शोषण गर्दछ। बच्चा निर्भरता को एक रिश्ते मा छ, मानसिक रूप ले साथै शारीरिक रूपमा, र लामो समय सम्म यौन आक्रमण को प्रतिरोध गर्न सक्दैन। यद्यपि यदि परिवारमा अर्को वयस्कसँग कुरा गर्ने निर्णय हुन्छ भने यसले अक्सर पुलिसको नेतृत्व गर्दैन। तथ्य यो छ कि एक बच्चा एक अपराधकर्मी हो, कम सम्भावित यो अपराध रिपोर्ट गरिनेछ र अदालतमा लगाइने सम्भावना छ। तथ्य यो छ कि अझै पनि मुख्यतः महिलाहरु आपराधिक कार्य को पीडित हुन्। पुरुष अपराधीहरू प्राय: वातावरण वा परिचित नजिकको सर्कलबाट आउँछन्।
चूंकि पीडितहरु एकदम लामो समय सम्म मौन छन्, यो यौन दुर्व्यवहार पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। उहाँ प्रायः मान्यता प्राप्त हुन्छ जब यो धेरै ढिलो हुन्छ र पहिले नै मानसिक वा शारीरिक लक्षणहरू देखा पर्दछ। त्यहाँ केही संकेतहरू छन् जुन यौन दुर्व्यवहारको संकेत हुन सक्छ, तर जरूरी रूपमा यो संकेत नगर्नुहोस्।
यौन दुर्व्यवहारको सामान्य संकेतहरू के हो?
विशेष गरी यो मुद्दा मा, धेरै टाढा, कहिल्यै शङ्काको दलदल पाठ्यक्रम एक को अक्सर बेमनासिब लड्न गर्न आरोप एक जीवनकालमा आरोप छ र अक्सर कहिल्यै फेरि rehabilitated छ किनभने नहट्न। तर, यो एक पटक मात्र वर्षसम्म सिकार पीडित, बरु व्यक्त दुरुपयोग अनदेखी छ भन्दा बढी संदिग्ध गर्न सिकार को उद्देश्यका लागि हुन सक्छ।
व्यवहार परिवर्तनहरू संदिग्ध हुन्छन्!
व्यवहारिक परिवर्तन अक्सर यौन दुर्व्यवहारको पहिलो संकेत हो। यसको मतलब यो होइन कि कुनै पनि व्यवहार असामान्यता यौन दुर्व्यवहारमा आधारित छ। बसोबास, साथीहरूसँग क्रोध, स्कूल प्रवेश वा नजिकको व्यक्तिको हानि यो परिवर्तनले व्यवहारमा हुन सक्छ। साथै, केहि सिक्ने प्रक्रियाहरू र विकासशील चरणहरू प्रायः अस्थायी व्यवहार अनावश्यकताको कारण हुन्।
स्पष्ट अवलोकन अक्सर जानकारी प्रदान गर्दछ, तर प्रत्येक व्यक्तिले चरित्र, उमेर, अपराधी र संविधान अनुसार दुरुपयोग दुरुपयोग गर्दछ। महत्त्वपूर्ण: अधिक असामान्यताहरू देखाउँछन्, अधिक संदिग्ध कठोर हुन्छ!
प्रारम्भिक बचपन व्यवहारको ढाँचामा दर्ता
सङ्ख्या संकेतहरू विशेष गरी संदिग्ध हुन्छन् र आमाबाबुलाई सजग गराउनुपर्दछ। यी विशेष गरी शिशुहरू समावेश: बच्चा वास्तवमा भण्डारण गरिएको थियो बालक जस्तो व्यवहार गर्न निद्रामा विकार र सपनाहरू को वृद्धि घटना, bedwetting वा आंत्र आन्दोलनहरु पछि लामो समयसम्म Saubersein, सामान्य नयाँ डर वा phobias, whiny व्यवहार, प्रतिगमनमा (उदाहरणका लागि, औंठी sucking, बच्चा टक) सुरक्षाको लागि आवश्यकता वृद्धि, भोक वा इच्छाहरू को हानि, सम्पर्क को कमी, सामाजिक सम्बन्ध को डर, यसको आफ्नै, विशिष्ट, अन्य बच्चाहरु र वयस्क को शरीर मा ब्याज विशेष फारममा स्थित एक संसारमा हटाउनुहोस् पनि खेलमा देखाउँछ (यौन प्रेरित अक्सर खेल वा विषय मा समायोजित छन् खेलको), सुन्दर चीजहरूमा रुचिको हानि पनि।
बच्चाहरु मा अक्सर स्कूल प्रदर्शन मा एक कमी गर्न विकार खाने, अपराध, निराशा, आत्महत्या गर्ने विचार मा लागूऔषध प्रयोग बाट दायरामा गर्न सक्छन् जो अन्य असामान्यताहरु थपिएका छन् छ। प्रायजसो त्यस्ता किशोरहरूले पनि उल्लेखनीय भक्ति यौन व्यवहार देखाउँछन्।
यौन दुर्व्यवहारको शारीरिक लक्षणहरू
माथि उल्लेखित व्यवहार परिवर्तनहरू को बावजुद सामान्यतया शारीरिक लक्षणहरू छन्, जुन एक्लै तर अक्सर यौन दुर्व्यवहारको पर्याप्त प्रमाण छैन। तिनीहरूले मात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्या जडानमा शंकास्पद अक्सर छन्। पेट दुखाइ, पेट दुखाइ, bruising, को मूत्र (थैली संक्रमण लागि) मा रगत वा आंत्र आन्दोलन (गुदा fistulas द्वारा) त्रासदेखि र थप वा प्रकृतिका कम अहानिकारक हुन, तर अक्सर यौन दुर्व्यवहार को संकेत हो हुन सक्छ। Flashy को लैंगिक क्षेत्रमा दुखाइ, बारम्बार खुजली, पेट घाइते, अनावश्यक गर्भावस्था गर्न यौनजन्य रोगहरू समावेश गर्नुहोस्।
यौन दुर्व्यवहार या त प्रकट हुन्छ जब बच्चा एक वयस्क मा रहन्छ, वा पहिले देखि नै यो राम्रो लक्षणहरु लाई देखाउँछ र आमाबाबु संदिग्ध हुन्छन् र जांच गर्न शुरू गर्छन।
असन्तोष अक्सर झटका पछ्याउँछ! अब के? म कसरी मेरो बच्चाको रक्षा गर्न र अपराधीलाई दण्ड दिन जान्छु? यदि बच्चा विषयको विषयमा चरम छ भने, यो प्रायः यो एन्क्रिप्ट गर्न वा यसलाई टुक्रामा राख्नुहोस्। त्यहाँ थुप्रै लक्षणहरू छन् जुन यौन दुर्व्यवहारको संकेत र अन्यथा विस्तृत छन्।
यो दुर्व्यवहारको लागी बच्चालाई गम्भीर रूपमा लिने यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै थोरै अवस्थामा बच्चाहरु यस्तो कुरा सोच्छन्। त्यसैले तिनीहरू हरेक संकेतलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन्, तथापि उछाल र एन्क्रिप्टेड यो हुन सक्छ।
बच्चाको यौन दुर्व्यवहारको लागि सिग्नल
मुद्दाहरू बिचार गर्न, कि बच्चाहरु अक्सर टिप्पणी गर्दैन किनकी अपराधी तत्काल वातावरण बाट आउँछ, सामान्यतया आफ्नो परिवारबाट! त्यो अक्सर बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा ठूलो अवरोध हुन सक्छ!
शान्त रहनुहोस् र बच्चालाई बलियो पार्नुहोस्!
शांत रहनुहोस्, जब यो गाह्रो हुन्छ। बच्चा एक स्थिति मा छ जहाँ उनी बेहोश हुन्छ, भ्रमित र अक्सर दोषी हुन्छ। कहिलेकाहीं यो बच्चाहरु दोषी आफैले अपराधीहरू होइनन्।
छिट्टै सकेसम्म पेशेवर मद्दत प्राप्त गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले तपाईंको बच्चालाई सान्त्वना, बलियो बनाउन, सुरक्षा र कैप्चर गर्न सक्छन्, तर केवल मनोवैज्ञानिकहरू र पेशेवरहरू प्रशिक्षित हुन्छन् जुन मानसिक क्षतिको कुनै पनि दुर्व्यवहार छोड्छ। तिनीहरू आमाबुबालाई छोराछोरीलाई यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्नका लागि राम्रोसँग मदत गर्न सक्छन् र कठिन परिस्थितिहरू र कसरी व्यवहार गर्न सक्छन्।
आमाबाबुको रूपमा, तपाईं बच्चा नियमित रूपमा नियमित रूपमा नियमित रूपमा मार्फत मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यदि यो नग्ननसैनिक र गलत देखिन्छ भने, आदतले पनि सुरक्षा प्रदान गर्दछ र बच्चालाई शंकास्पद अनुभवहरू प्रशोधन गर्न मद्दत गर्दछ।
कहिलेकाँही यो एक बेहोश संदेह संग सुरु हुन्छ जुन चाँडै कडा हुन्छ। यदि बच्चाले यौन दुर्व्यवहारको बारेमा कुरा गर्दैन भने, तपाइँ यसलाई प्रत्यक्ष प्रश्नहरूको साथमा बमबारी गर्नु हुँदैन, अन्यथा यो हुन सक्छ कि बच्चा पूर्णतया बन्द हुन्छ।
बच्चालाई दिनको बारेमा भन्नुहोस्, सामान्य भन्दा बढि विस्तारमा, र ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भने यो गम्भीर रूपमा अप्रिय घटनाहरू बोल्छ। केही कहिल्यै - साँच्चै कहिल्यै - बच्चा को आदर्श वाक्य एउटा निन्दाले: "पर्छ तर तपाईं धेरै पहिले भन्दै थिए" या बुरा: र "म आफ्नो ठाउँमा हुनेछ" तिमी किन आफैलाई खसेको किनभने गरौं गर्नुभयो "... "
यस्तो बयानले छोराछोरीको अपराधलाई अझ प्रोत्साहन दिन्छ र यो पछि पनि खराब हुन्छ। यो दुर्व्यवहारलाई पनि सम्बोधन गर्न एक बच्चाको साहस धेरै खर्च गर्दछ। यदि तपाईंले पहिलो सद्भावबाट बरामद गर्नुभयो भने, तपाईंले माथि उल्लेखित रूपमा, मद्दतको लागि विशेष कर्मचारीहरू सोध्नुपर्छ। अधिकांश अवस्थामा, यसमा पुलिस समावेश छ, किनभने बालबालिका दुर्व्यवहार एक गम्भीर अपराध हो जुन यस अपराधीबाट सबै अन्य बच्चाहरूको रक्षा गर्न दण्डित हुनुपर्छ। मनोवैज्ञानिकहरु संग परामर्श मा बच्चाहरु को लाभ को लागी पुलिस र कसरि शामिल हुनु पर्छ।